Ukuhlahlela kunye nemiski yokunyamekela kwesikhumba ekhaya
Ikhanda elihle neliphilileyo lobuso liphupha lentombazana. Ukuze yena asincede thina kunye nabanye ngesimo sakhe esihle kakhulu, ufuna ngokunyamekela ukunyamekela. I-salons yobuhle, i-creams ebiza kakhulu - yonke into efanelekileyo, kwaye kuthekani ukuba, umzekelo, awunalo lonke ixesha okanye imali? Akukho mfuneko yokukhathazeka, ngenxa yokuba isikhumba sakho ubuso, unokwenza oko ngokwakho, ulungele ukuba ube ne-salon ekhaya. Kwaye ke, ukuhlahlela kunye nemiski yokunyamekela kwesikhumba ekhaya.
Masiqale ngokungaxhaswanga kwiimpawu zezilwanyana zamabhinqa ekunyamekeleni ubuso kubhekiselele - kukutshiza. Ukuhlanjululwa kwale arhente ebusweni, kuphucula ukubonakala kwesikhumba sakho, ukuhlambulula kwaye ngoko kususa iiseli ezifile, ukunikela ekuphumeni kwe-oksijini ngokusebenzisa iiferethi ezikhethiweyo. Ngokusetyenziswa ngokufanelekileyo nokuqhelekileyo, isikhumba sakho siya kufumana umthunzi oqaqambileyo, kwaye uya kulibala malunga neziphoso zalo, njengokufumba nokungafezeki okuhlukeneyo ngendlela yovulo oluncinane. Ulusu luya kuba lukhuni, lufunde kwaye lubusheleleke, kwaye ukukhanya nokukhanya kuya kuba ngabahlobo bakhe abasondeleyo. Ngako oko, i-scrub kufuneka ibe yinxalenye yenkqubo yamanzi. Ngoku ngoku siyakuqwalasela ngokukhawuleza izikriti kunye neemaski zokunyamekela kwesikhumba ekhaya, ukulungiswa kwazo kunye nemisebenzi yesicelo. Siza kuqala ngokukhawuleza, njengoko sele uqikelele ngokutshiza, esetyenziselwa ukwenza nokwahlula ngohlobo lwakho lolusu.
1. Thatha idibanki enye, faka i-tablespoon ye-oat flakes kunye ne-1 ithispoon ye-honey. Yongeza isoda kwi-tip yepaspoon uze udibanise kakuhle. Isikratshi sikulungele ukusetyenziswa.
2. I-teaspoon yekhofi yomhlaba exutywe kunye neepuniji ze-2 ze-kefir eziqhelekileyo.
3. Thatha isipuni sejusi kwi-berries omuncu, umzekelo, i-apula okanye i-cranberry. Yongeza ipoyiji ye-1 yendalo ye-sunflower imbewu kwijusi ngaphandle kwegobolondo, kwaye ekugqibeleni uthele i-lemon juice 1 ithisipuni.
1. Thatha udongwe obumhlophe, udibanise i-1 teaspoon ye-eggshell ecocekileyo. Yizalise ngexabiso elincinci lamanzi abilayo kwaye udibanise de kubekho isisindo esinobunzima. Ukutshiza kwethu kukulungele.
2. I-tablespoon ye-yogurt exutywe ne-1 ithisipuni yeendawo zekhofi kunye nokusikwa ebusweni bakho.
Ikhumba elomileyo lobuso.
1. Kwiziko lekhofi, faka kwi-tip ye thispoon yetyuwa kunye nesinamoni, kunye ne-teaspoon yeshukela. Sityhala isipuni se-1 se-oli yemifuno (nayiphi na into eya kuyenza).
2. Thatha i-1 teaspoon i-flour efana nefuthe efana neqanda, shaya i-yolk yolanga eli-1 uze ungeze i-teaspoon 1 ye-ukhilimu omuncu.
Izihluma ezifanelekileyo naluphina uhlobo lolusu.
1. Thatha i-1 teaspoon, ekuqaleni u-rice ocoliweyo (unokwenza kwinqwelo yokutya yekhofi), faka 1 ithispoon ye-cottage shiese kunye nayiphi na ioli.
2. Thatha isipuni 1 se-Herculean flakes kwaye udibanise nekhukhamba enomhlaza. Makhele imitha engama-20. Isikratshi sikulungele.
3. Nge-tablespoon ye-oatmeal, hlanza i-juti e-fresh etyutyiweyo kwaye uyifake imizuzu eyi-15. Xa i-oatmeal ekhukhulayo - i-scrub isilungele isicelo sayo ngokukhawuleza.
Kwaye ekugqibeleni, ngokubhekiselele ekuhlaleni, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba nganye iiflethi kufuneka isetyenziswe kwisikhumba somntu ococekileyo osihlambulukileyo (mhlawumbi ngexesha lokulala). Ukujikeleza ukushukunyiswa kwemizuzu engama-1-2, ngoko umphumo olungcono, ukutshiza kungasala ebusweni omnye umzuzu wama-5-10 kwaye uhlanjwe ngokukhawuleza ngamanzi afudumeleyo. Emva koko, sebenzisa ukhilimu wobuso ngokuhambelana nomhlobo wesikhumba sakho. Khumbula, ukusetyenziswa kwe-scrub akukhuthazwa kwesikhumba ejikeleze amehlo. Sebenzisa ukucoceka ubuso obunjalo kungekho ngaphezu kwama-1-3 ngeveki, ukuba ulusu lwakho lubuhlungu kakhulu kwimeko, lanele ixesha eli-1.
Ngoku ke khawuqwalasele iirephepheni zamaski ebuso kwiimeko ezifanayo zasekhaya. Ubuso obusweni ngenye yeendlela eziphambili kunye nezononophelo zesikhumba sakho. Siyabulela iintlobo zemaski, ulusu lwethu lufumana ukutya okunomsoco olukufunayo, kwaye ukuba ezi zixhobo zenziwe kwimveliso yendalo, ngoko ngokuthe ngqo i-vitamins eninzi. Emva kokusebenzisa lo mzobo uzakuziva ngokukhawuleza ukuba ulusu lwakho lufumene njani ubukeka obuhluke ngokupheleleyo. Isimo sakhe, umbala wakhe uphucule, waza waba nesisa kunye nokulungiswa kakuhle. Kwaye ke, nanku ezinye "zokupheka" zikaMasks ubuso, ngokuxhomekeke kwimpawu zesikhumba sakho.
1. Thatha isipuni esine-1 ye-bran kroksi ekhethiweyo kwaye udibanise i-1 ithispoon yerisi ye-lemon kunye nomlinganiselo ofanayo nobusi. Gcwalisa konke ngamanzi abilisiwe, kwiqondo lokushisa. Hlanganisa de i-uniform mass isifumane kwaye isebenze imizuzu eyi-10-15 ebusweni, uze uhlambulule kakuhle ngamanzi afudumeleyo.
2. Hlaba amaqanda abamhlophe uze ungeze i-teaspoon yobusi, ijisi lemon, umgubo kunye nobisi olutsha. Faka isicelo ngomxube we-15-20 imizuzu ebusweni.
3. Thatha isipuni 1 sejisi yamagilebhisi kwaye wongeze i-yolk kunye ne-1 ithispoon yeoyile yemifuno kunye ne-spoonful ye-cream any face cream. Le maski isetyenziswe ngamacandelwana amabini-owokuqala kwemizuzu emi-5, ngoko ke isibini isango ngokwawo, esifanele sigcinwe imizuzu emibini.
1. Thatha isipuni se-1 sewayini elimhlophe elixutywe kwaye udibanise nabamhlophe abamhlophe abasahlanjululwa, sebenzisa imizuzu eyi-10.
2. Amaqabunga amacwecwe anqabileyo (2 wezipuni) athulule i100 gram zamanzi abilayo. Ngendlela, amaqabunga e-mint afanelekile, zombini ashushu kwaye asomile. Sonke sibeka le siqingatha seyure kwifom eqiniweyo. Emva koko, unxinxe kwaye ungeze umgubo wengqolowa uze udibanise de kube yinto enzima. Sebenzisa ngaphakathi kwemizuzu eyi-15.
3. Sithatha amajikijolo kwanoma yiyiphi i-currant, engeza i-1puni yepuniweyo yomgubo kwaye ubeke ilusu lobuso (imizuzu 10-15).
1. Thatha isipuni se-1 saso nasiphi na isantya seqhamo kwaye ungeze 1 i-yolk yeqanda kuyo, kunye ne-1 teaspoon ye-ukhilimu omuncu ngeoli yemifuno (1 ithispoon yeoli). Bamba imizuzu eyi-15-20, uze uhlambe.
2. Kwi-yolk yolanga le-1, yongeza i-teaspoon ye-1 yipisituni yondlo ebusweni, yongeza i-teaspoon ye-bhotela okanye i-margarine. Sibambe imizuzu eyi-10-15.
Mask kuzo zonke iintlobo zesikhumba.
Thatha ama-200 amagremu wamanzi afudumele kwaye wongeze, kuwo, 1 isipuni se-honey. Ngoluhlu lwezandla zombane, sebenzisa lesi sombululo kwi-5-7 imizuzu ebusweni, uze uhlambulule.
Ekugqibeleni, qaphela ukuba iimaski zobuso kufuneka zisetyenziswe, kunye nezikratshi, kwesikhumba esiluhlambulule ngaphambili. Ungayisebenzisa nangaliphi na imini. Ungalokothi ubambe imaski yobuso ngaphezu kwemizuzu engama-20 ukuya kweyesi-25. Gcoba ngokukhethekileyo ngamanzi afudumele, abilisiwe, uze usebenzise i-cream cream. Ubuninzi bokusetyenziswa kweemaski, ngokuthe ngqo kuxhomekeke kulolu hlobo lolusu. Ukuba usebenzisa ngokufanelekileyo imaski kwaye uhlambele ubuso obuphekwe ekhaya, uya kuziva unempembelelo enkulu. Ezi zihlunu kunye neempawu zokunakekelwa kwesikhumba ekhaya kufuneka zisetyenziswe nayiphi na intombazana exhalabele kakhulu ngemicimbi yobungqina bayo nolutsha.
Indlela yokukhetha izimonyo ezifanelekileyo kwesikhumba sengxaki?
I-cavitation liposuction: ingundoqo yenkqubo, izibonakaliso kunye nokuchasene
Amakhowe abhaka kwi-ukhilimu
I-Tea ene-dog rose
Ikhekhe nge yogurt kunye ne-jam